Xabbad Joojin laga gaaray colaadda Gaza - BBC News Somali
Xabbad Joojin laga gaaray colaadda Gaza
Image caption Qaybo ka mid ah Gaza oo la duqeeyay
Israa'iil iyo kooxda hubeysan ee Falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa ku heshiiyay xabbad joojin socon doonto muddo 72 saacadood ah, taasi oo loogu talagalay in dadka reer Gaza lagu gaarsiiyo gargaar bini'aadamnimo, xabbad joojinta ayaa billaabanaysa maanta oo Jimce ah.
Heshiiskaasi xabbad joojinta ayaa waxaa ku dhawaaqay Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Mareykanka, John Kerry, iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Ban Ki-Moon.
Bayaanka heshiiskaasi ayaa waxaa akhriyay afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay:
Xabbad joojintan ayaa imanaysa in ka badan 20 maalmood oo uu halkaasi dagaal ka socday, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 1,400 oo qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo u badnaa dad rayid ah, halka tobanaan kun oo qof oo kalana lagu khasbay in ay ka barakacaan guryahooda.
Israa'iil ayaa si xun loogu dhaleeceeyay dhimashada iyo burburka ay ka gaysatay Gaza, xilli ay isku dayaysay in ay joojiso gantaalada uga imaanaya dhanka Xamaas.58 Israa'iiliyiin ah oo intooda badan ay yihiin askar ayaa lagu dilay dagaalka.
Xamaas ayaa dhankeeda ogolaatay in ay hakiso dagaalka iyadoo ka jawaabayso baaqa Qaramada Midoobay.
Sami Abu Zuhri waa afhayeen u hadla Xamaas, waxa uuna sheegay in ay heshiiskaasi tixgelinayaan haddii Israa’iil ay dhankeeda ka tixgeliso.
Dhanka kale, dowladda Masar ayaa waxa ay ku martiqaaday maanta oo Jimce ah Israa'iil iyo Falastiiniyiinta wadahadal nabadeed oo ka dhaca magaalada Qaahira, si la isugu dayo in dhibaatada Gaza xal waara laga gaaro.
Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Mareykanka, John Kerry, ayaa sheegay in wadahalkani uu fursad u yahay labada dhinac ee Israa'iil iyo Falstiyiniinta.
Ururka Xamaas ayaanan ka qeyb gali doonin wadaxaajoodka Qaahira, iyadoo madaxweynaha Falastiiniyiinta uu mas'uul ka yahay magacaabista ergada Falastiiniyiinta uga qeybgalaysa shirkaasi, maadaama Israa'iil iyo Mareykanka aanay ogolayn in ay miiska la fariistaan Xamaas.
Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay sii wadi doonaan waxa ay ku tilmaantay howgalka ka dhanka ah kanaalada ama marinada dhulka hoostiisa mara inta ay socoto xabbad joojinta.
Horay waxaa u burburay wadahadalo lagu doonayay in lagu gaaro xabad joojin, oo ay sabab u aheyd dalabyo isdiidan oo ay soo jeedinayeen labada dhinac.
Xamaas ayaa waxa ay doonaysaa in la qaado in la qaado go'doominta lagu hayo Gaza, halka Israa;iil ay doonayso in la damaanad qaado ammaankeeda.